बस कार खरीद जस्तै, एक प्रयोग RV खरीद (मनोरंजनात्मक वाहन) वा camper एक भयानक सम्झौता प्राप्त गर्न ठूलो बाटो हुन सक्छ. बस कार जस्तै, RV गरेको खो मूल्य क्षण तिनीहरूले धेरै को बन्द संचालित छन्. तर, तपाईं क्रय मा योजना छन् RV बारेमा एक सानो अनुसन्धान गरिरहेको द्वारा आफैलाई र आफ्नो लगानी सुरक्षा गर्न आवश्यक.
यहाँ एउटा RV Vin नम्बर जाँच
बस कार जस्तै, RV गरेको एक VIN छ (वाहन पहिचान नम्बर) र तिनीहरूले एक RV मा विभिन्न ठाउँमा स्थित छन्. तिनीहरूले सामान्यतया एक कार तिनीहरूलाई छ भनेर नै ठाउँमा राखिएको छन्, र ड्यासबोर्डमा तपाईं गाडीको अगाडीको शिशा को सामने माध्यम देख माध्यम यो हेर्न सक्षम हुनुपर्छ. तथापि, यो सधैं मामला छैन. निर्माता जस्तै इन्जिन र फ्रेम रूपमा विभिन्न ठाउँमा राख्नुहोस् गर्छन्. तपाईं पनि कोर समर्थन हेर्न सक्छन् (रेडियेटर समर्थन) , यो स्टीयरिंग स्तम्भ मा, चालक वा यात्री ढोका वा ढोका पोस्ट, र कहिलेकाहीं फायरवाल मा. तपाईं पनि यो त्यहाँ सूचीबद्ध छ भने हेर्न मालिकको मार्गदर्शन जाँच गर्न सक्छन्, तर यो कि RV छ कि संख्या नै छ कि पुष्टि गर्न सबै भन्दा राम्रो छ.
मालिक तिनीहरूलाई छ भने, तपाईं पनि क्रय कागजातहरू मा हेर्न सक्छन्, शीर्षक र बीमा कागजातहरू. यो VIN को RV गर्न अनुपम छ, कुनै दुई मोटर घर नै एक छ, त्यसैले यो तपाईं VIN नम्बर अधिकार प्राप्त महत्त्वपूर्ण छ.
तपाईं खरीद विचार गर्दै छन् कि एक कार लागि एक VIN हेर्नुहोस् भनेर नै तरिकामा, तपाईं साथै एक RV VIN जाँच चलाउन सक्नुहुन्छ. यो रिपोर्ट तपाईं वाहन नै pertains भनेर जानकारी दिन हुनेछ, निर्माता छ जो तपाईं बताउँछ कि एक RV कूटवाचक, यो निर्माण र निर्माता र enginge र प्रसारण जानकारी देखि विकल्प थियो जहाँ.
एक RV VIN नम्बर खोज चलिरहेको द्वारा तपाईं पनि अन्य बहुमूल्य जानकारी पाउनुहुनेछ, यस्तो भने RV एक दुर्घटना मा रिपोर्ट र छ कसरी व्यापक थियो. यो RV हात केही समय परिवर्तन भएको छ पनि भने यो ओडोमिटर समस्या वा रोल पीठ सम्भव तपाईं सचेत गर्नेछ. मालिक बन्द भुक्तानी गरेको छैन भन्ने RV मा कुनै पनि सम्भव liens छन् भने यो पनि सूची हुनेछ. र lastly यो सम्बोधन गरिएको छैन भनेर कुनै पनि संभावित सम्झन्छन् को देखाउन सक्छ.
एक प्रयोग RV खरीद गर्दा एक RV VIN गरेर तपाईंले मन केही शान्ति लागि आफैलाई केही सडक तल संभावित टाउको दुखाइ र यो सस्तो बीमा बचत सक्छ जाँच.